Baarlamanka Soomaaliya oo amray hakinta bixinta kaararka aqoonsig Muwaadiniinta – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muqdisho – Mareeg.com: Baarlamaanaka Soomaaliya oo maalintii 2-aad maanta ka dooday fududeynta bixinta kaararka aqoonsiga iyo baasaboorka ayaa go’aamiyey in la hakiyo bixinta kaararka aqoonsiga ilaa si rasmo ah looga soo saarayo sharcigiids.
Xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa maalmahaan dood ka dhiibanayey dhibaatada laga maro kaararka aqoonsiga muwaadinimo iyo iyadoo lacagaha dadweynaha laga qaado aan la ogeyn halka ay ku baxaan.
Gudoomiye ku xigeenka 2-aad ee baarlamaanka Soomaaliya, Mahad Cabdalle Cawad ayaa baarlamaanka usoo gudbiyey in ay cod u qaadaan qaraarkaan kadib labo maalmood oo laga doodayey.
Baarlamaanka Soomaaliya ayaa cod ku go’aamiyey in la hakiyo bixinta waraaqaha aqoonsiga muwaadinimo ilaa laga soo saarayo sharci rasmi ah oo lagu dhaqo, islamarkaana qof kasta ka heli karayo kaararkaas deegaankiisa, loogana goynayo qiimo yar oo shacabka Soomaaliyeed wada awoodi karaan.
Waxaa sidoo kale baarlamaanku go’aamiyey in la saaro guddi dabagal ku sameeya dhaqangalka go’aanka ay soo saareen, dabagalka shirkadaha heysta soo saaridda kaararka aqoonsiga iyo baasaboorka iyo halkii ay mareen lacagihii badnaa ee laga qaaday shacabka ee bilihii lasoo dhaafay loo sameynayay waraaqaha aqoonsiga muwaadinimo.
Xafiiska dad-dhiga dowladda Hoose ee Muqdisho oo furan dhowr bilood ayaa noqday goob masuqmaasuq dilooday, waxaana halkaas ka bilowday laaluush, iyadoo dadka aan laaluushka bixin lagu dhibo helitaanka dukumiintiga ay rabaan, tiiyoo ay usii dheertahay iney bixiyeen lacagta maamulka gobolka Banaadir u gooyay.